Maxkamadda ICJ Ayeeynu Aadi Doonaa | allsanaag
Maxkamadda ICJ Ayeeynu Aadi Doonaa
Hoggaamiyaha SNMta, Muuse Biixi, ayaa waxa uu sheegay dhawaan in hadii dawladda Soomaaliya ay is fahmi waayaan ay Maxkamadda Cadaalada Adduunka ee ICJ arrintooda la aadi doonaan. Hadaba, maxkamadda ICJ maxeey tahay shaqadeeda?
Shaqada maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah waxa ay ka kooban tahay labba qodob oo kalla ah:
Muranada sharciyeed oo ay soo gudbistaan wadamadda si loo xalliyo murankooda, iyada oo la tixraacayo sharciga caalamiga ah;
Iyo in ay siiso fikrado la tallin oo ku aadan su’aalaha sharciyeed ee loo soo gudbiyo oo ay u soo gudbiyaan hay’addaha Qaramada Midoobay iyo hay’adaha madaxa bannan.
Tusaale, Qaramada Midoobay waxeey Maxkamadda Caalamiga ee ICJ weeydiisteen ineey tallo sharciyeed ka soo bixiyaan sanadkii 2008dii, in Kosovo ay noqon karto dal madaxbannaan oo gooni isku maamuli kara iyo in kalle, iyada oo laga eegayo sharciga caalamiga ah.
Hadaba, ICJ ayaa ku soo war cellisay sanadkii 2010kii Qaramada Midoobey, iyada oo uga soo jawaabtay su’aashii aheeyd in Kosovo ay noqon karto dal madaxbannaan iyo in kalle, waxeeyna ICJ sheegtay in marka dhinaca sharciga laga eegayo ay ku dhawaaqi karaan madaxbannaani ay yeesheen dadka Kosovo.
Si kastaba ha ahaatee, maamulka SNMta iyo Muuse Biixi meelna ugama bannaana in ay dacwad u gudbistaan ICJ, sababtoo ah ICJ shaqadeedu ma ahan ineey u gar naqdo beel gooni goosad ah yo dawladda Soomaaliya.
Hadaba, marka loo soo noqdo goosashada ay beesha Isaaq ku doonayaan ineey Soomaaliya inteeda kalle kaga go’aan ayaa ah mid aan sinaba u shaqeeyneen oo caalamka aan ka iibsameeyn sababtoo ah beesha Isaaq dhinac waxeey ka yiraahdeen dawladdii Soomaaliya ayaa na leeysay, dhinaca kallena waxeey yiraahdeen xudduudkii Inigiriiska ayaan soo xireeynaa. Qof kasta oo isku daya in uu qaado garta ay ku doodayaan beesha Isaaq qashinka ayuu ku darayaa waayo ah waa la i dilay iyo dhul dad baan sheeganayaa ayaa waxeey tahay mid aan dadka u cuntameeyn.
Soomaalidu horey waxeey u tiri, “Hungurigii wax ka weeyn la geshaa, wuu dillaacaa.” Waxeey kalloo tiraahdaa, “Wax badso wax beel ayeey dhashaa.” Beesha Isaaq waxeey is lahaayeen aad wax badsataan, balse waxaa ka dhacay wax beel. Hadaba, cid aqoonsi siineeysaa SNMtana ma jiri doonto sababta oo ah dooda ay wattaan ayaa ah mid aad daciif u ah ,hadii ay dil noqotana Soomaali oo dhan ayaa is dishay.
← DARIIQA UU TRUMP AQALKA CAD U MARI DOONO Allah maxaa ku dhacay →